भिम रावल पनि आएपछि माधव नेपाललाई आउट गर्दै एमाले एकता घोषणा, दुईजना सहअध्यक्ष…. – GALAXY
भिम रावल पनि आएपछि माधव नेपाललाई आउट गर्दै एमाले एकता घोषणा, दुईजना सहअध्यक्ष….
काठमान्डौ ।नेकपा एमालेका दोस्रो पुस्ताका हस्ती नेताहरु अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीतिर देखिएका छन् । यसअघि वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षमा लागेका उपाध्यक्ष भीम रावल पनि नेपाल पक्षमा छैनन् ।
उनी ओलीसँग नजिकिइसकेका छन् । सुरेन्द्र पाण्डे पनि माधव नेपालतिर रहने पक्षमा देखिएका छैनन् । दोस्रो पुस्ताका प्रभावशाली नेताहरुमा उपाध्यक्ष भीम रावल, महासचिव ईश्वर पोखरेल, उपमहासचिव विष्णु पौडेल, स्थायी कमिटी सदस्य सुवासचन्द्र नेम्वाङ र सुरेन्द्र पाण्डे हुन् ।
उनीहरुलाई एमालेको भावी नेतृत्वकर्ताका रुपमा हेरिएको छ । एमाले एकताका लागि रावल, पोखरेल, पौडेल, नेम्वाङ र पाण्डे सबैभन्दा सक्रिय छन् ।उनीहरुले अबको नेतृत्व आफूहरुमध्येबाटै आउने देखेर पनि एकताको पक्षमा सशक्त रुपमा लागेका हुन् । त्यसका अलावा उमेरको हद पनि कारण छ ।
उमेर हदको आशाले अहिले एमालेका दोस्रो पुस्ताका चार हस्तीहरु उत्साही देखिदैछन् । उनीहरु केपी शर्मा ओलीको उत्तराधिकारीको दौडमा देखिइसकेका छन् ।
ओलीले त्यस्तै परे उमेरहदको विषय राखेर कडा निर्णय लिन सक्ने भएकाले पनि दोस्रो पुस्ताका हस्तीहरु नेतृत्वमा पुगिने र एमाले एकता पनि बन्नेसम्मको आशामा छन् । तर, ओलीले त्यति सजिलै एमालेको नेतृत्व त्याग्ने सम्भावना तत्काल छैन ।